Delta, ilay emulator manaraka avy amin'ny mpamorona GBA4iOS, dia miditra amin'ny dingana beta | Vaovao IPhone
Delta, ilay emulator manaraka avy amin'ny mpamorona GBA4iOS, dia miditra amin'ny beta
Amin'ny 23 Novambra miresaka aminao izahay de Delta, ny emulator manaraka avy amin'ny mpamorona GBA4iOS izay, raha ny fahitanay azy tranokalan'izy ireo, hifanaraka amin'ny konsolin'ny Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy Advance ary Game Boy Color. Hatramin'izao dia fantatray fa ny anao voalohany beta ho tonga amin'ity Desambra ity ary toa efa tonga io fotoana io, na farafaharatsiny afaka mameno fanontaniana kely izahay mba hisoratra anarana hanandramana ity emulator ity izay havoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny 2017.
Riley Testut, mpamorona ny Delta, dia hamela antsika hizaha toetra ny beta amin'ny emulator manaraka azy amin'ny fomba roa: ny iray dia beta izay azontsika antsoina hoe "normal". ny beta iray hafa dia ho zavatra manokana kokoa ary ilay iray izay hahazo fanavaozana bebe kokoa, izay tamin'ny voalohany dia midika fa tsy ho marin-toerana kokoa izy io, fa koa hanamboatra bibikely aloha kokoa noho ny beta mahazatra. Amin'ity beta ity ho an'ny asa fanaovan-gazety no ahafahantsika miditra amin'ny alàlan'ny famenoana ny fangatahana ao amin'ny ITY FIAINANA ity. Ao amin'ny valin'ny fanontaniana dia hamaly ireo fanontaniana manomboka amin'ny fitaovana ananantsika ka maninona isika no te-hanandrana an'ity beta an'ny emulator ity. Afaka mangataka ny kinova "Press" izahay hatramin'ny 23:59 alina ny zoma 16 Desambra.
Delta emulator dia havoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny 2017
Ny tena manaitra ahy kely momba ny takiana mba hitsapana ny kinova Press an'ny Delta betas dia ny iray amin'izy ireo manana ID Apple hampiasana ireo kinova natolotra tamin'ny alàlan'ny TestFlight. TestFlight dia rindranasa Apple ahafahantsika mametraka kinova fitsapana na fampiharana izay efa nanaovanay famandrihana, zavatra izay ataoko izao miaraka amin'ny fampiharana ViewRanger izay hitantsika tao amin'ny teny fototra nanolorana ny Apple Watch Series 2. Ity Mahagaga ny làlana fametrahana satria miresaka momba ny emulator isika, diso aho, raha tsy izany dia tsy maintsy apetrakay amin'ny fomba hafa. Ny fepetra takian'ilay developer dia ny anananay nametraka iOS 10 na taty aoriana.
Amin'izao fotoana izao dia be ny fisalasalana, saingy misy zavatra iray mazava: tsy ho ela dia hanana emulator mora vidy kokoa noho GBA4iOS isika. Te hanandrana ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Delta, ilay emulator manaraka avy amin'ny mpamorona GBA4iOS, dia miditra amin'ny beta
Kamerar ZOOM Lens Kit dia manatsara ny fakantsary iPhone 7 Plus ho an'ireo izay mangataka bebe kokoa